Podcast 12 × 31: Apple Music, Dolby Atmos iyo Hi-Fi | Waxaan ka socdaa mac
Podcast 12 × 31: Apple Music, Dolby Atmos iyo Hi-Fi
Ugu dambeyntii shalay kooxdu waxay la kulantay inay si toos ah u baahiso dhacdo ka mid ah #podcastApple. Toddobaadkan buuqan ayaa la xaqiijiyay iyadoo loo mahadcelinayo Apple Music, Dolby Atmos iyo Hi-Fi ... Xaqiiqduna waxay tahay in shirkadda Cupertino ay bixin doonto tayada codka ee kafiican adeeggaaga muusikada qulqulka iyada oo aan wax qiimo ah ugu fadhin isticmaalaha.
Laakiin waxaa jira dhowr arrimood ama dhowr qodob oo lagu qeexayo arrintan waxayna umuuqataa in dhagaha dhagaha oo dhami aysan awoodi doonin inay tayadaan ku bixiyaan arrimo kala duwan. Taasi waa sababta intii lagu guda jiray barnaamijkii 'Podcast' ee shalay waxaan go'aansanay inaan ku darno dhowr marti ah oo khibrad u leh muusikada, in kasta oo midkood awoodi kari waayey inuu ka qeyb galo. Labaduba waa adeegsadeyaal iyo kuwa raacsan kuwayaga Kanaalka Telegram iyo kiiskan khubarada muusikada kuwaas oo qiimo badan ku daray Podcast-kii shalay.
Kaasoo ka luntay barnaamijkan 'Podcast' Waxaan kugula talineynaa inaad ka dhageysato mid ka mid ah barnaamijyada la heli karo, sidoo kale waxaad si toos ah uga arki kartaa muuqaalkan aan hoos uga tagnay:
Hadaad rabto waxaad toos noogula socon kartaa kanaalkayaga YouTube, ama sug dhowr saacadood inta laga helayo codka maqalka baahinta iyada oo loo marayo iTunes. Haddii aad wax dhibaato ah, shaki ama soo jeedin ah oo aad rabto inaad ku wadaagto barmaamijkeena, waxaad kaga faaloon kartaa si toos ah sheekada laga heli karo YouTube, adoo adeegsanaya #podcastapple hashtag on Twitter ama ka kanaalkayaga Telegram.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxa ugu fiican ayaa ah inaan abuureyno beel qurux badan waana u fiican tahay qofwalbo inaad ku darsato hadhuudhkaaga ciidda xulasho kasta oo aad heysato sidoo kale hadaad noola noolaato waxaa macquul ah inaad hadiyad leh raxan raxan aan si toos ah ugu fulinayno. Waxaan ku faraxsanahay inaan waqti la qaadanno asxaabteyda inaan ka wada hadalno waxa aan jecel nahay, Apple iyo wararka kale ee usbuuca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Podcast 12 × 31: Apple Music, Dolby Atmos iyo Hi-Fi
Sida loo qaabeeyo Mac inuu u akhriyo ogeysiisyada imanaya
AirPods waxay lahaan karaan maqal lumis ah oo cusbooneysiin ah sida uu qabo Prosser